Kunamata Pfungwa Kukunda Makaro | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Pfungwa Kukunda Makaro
Nhasi tichave tiri kubata nemunamato mapoinzi ekukunda kukara. Zvinoenderana neduramazwi nyowani reWebster reChirungu, makaro anotsanangurwa sekuda kukuru uye nehavi kwechimwe chinhu kunyanya hupfumi, simba uye chikafu Makaro itsika ine njodzi inofanira kudzikiswa kana murume achizadzisa zvizere kugona kwake. Ngatikurumidzei titarise nyaya yaEsau naJakobho. Makaro aEsau akaita kuti arasikirwe nechinzvimbo chake sevanhu vakura nekuda kwekuti aida kuwana ndiro yekubika.
Imwe yemhedzisiro yakaipa yekukara ndeyekuti inokanganisa kuzadzikiswa kuzadzikiswa kwezvinhu zvikuru. Munhu anokara haazombooni chero hukuru hukuru maari kana maari. Vachagara vachifunga vamwe vanhu vakuru kwavari. Makaro anogona kutungamira kuhondo sekutsanangurwa kwazvinoitwa mubhuku raZvirevo 28:25 Vanokara vanomutsa kukakavara, asi avo vanovimba naJehovha vachabudirira. Murume anokara anogona kuenda chero kureba kuti awane chimwe chinhu kunyangwe zvichizoda kuti asiye Mwari mukuita. Hazvishamisi kuti bhuku raRuka 12: 13-15 rinotsanangurazve zvinofanirwa kuitwa kukara 'isu tinofanirwa kuchenjerera uye kuchenjera pamhando dzose dzemakaro.
Mwari vanonzwisisa kuti munhu ane makaro haatende. Panzvimbo yekuti iye atende Mwari nekuda kwezvinhu uye maropafadzo iye akagamuchira, iye zviri nani kunyunyutira kuna Mwari pamusoro pezvinhu zvaasati agamuchira izvozvi. Ipo, mamiriro ake ari nani zvakanyanya kupfuura vamwe vanhu variko. Kwakwaziswa kwakaita kuti Sauro aone David sematyisidziro kunyangwe aive mambo. Makaro anoderedza murume. Mambo Sauro pane imwe nguva haana kumbozviona iye semutongi weIsreal, akasiya mabasa ake ese ekutarisira uye akatarisa pakubvisa David chete. Izvi zvaikonzerwa nekuti David akabudirira kuuraya Goriyati uye vanhu vakamurumbidza nekuda kweizvozvo. Mambo Sauro havana kuona iri sedambudziko kudzamara vaparadzwa nedhimoni riya rinonzi makaro.
Saizvozvowo, Judhasi Iskarioti akadyiwa nemweya wemakaro. Izvi zvinotsanangura kuti sei asina kumboona chakaipa pakuburitsa pachena kuti Jesu aive ani pamari. Judhasi haana kuona kushaya simba kwake kukara kusvika aparadzwa nako. Tinofanira kuziva kuti humwe hwutera hwedu makaro. Kunzwa kwekusagutsikana kuwana hupfumi, simba uye zvimwe zvinhu zvatinoona zvichidikanwa pakurarama. Kana tangoona izvi sedambudziko redu, ipapo tiri munzira yekuwana mhinduro kwazviri.
Paunowana mhinduro, simba reminamato harigone kusimbiswa. Kana iwe uchizobudirira kupedza hunhu hwakaipa, munamato unodiwa kwazvo. Ndinoraira nesimba rematenga, mweya wese wemakaro muhupenyu hwako unopiswa nemoto waJehovah Mweya Mutsvene. Ndinodudzira rusununguko rwako kubva kumweya wakaipa uyu muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinouya pamberi pechigaro chetsitsi nhasi kuti ndiwane tsitsi kubva kumupirisita mukuru wedenga. Ndinokumbira kuti netsitsi dzenyu dzinogara nekusingaperi mundiregerere zvivi zvangu zvese nezvakaipa nemuzita raJesu. Ndinonamata kuti nesimba reropa rakadeurwa pamuchinjikwa weKarivhari iwe utarise zvivi zvangu zvizere muzita raJesu.
Ishe, rugwaro runoti uyo anoviga zvivi zvake haabudirire, asi anozvireurura achawana tsitsi. Ishe hupenyu hwangu hwazara nemweya wemakaro, ndakaita zvakaipa zvakawanda nekuda kwekunzwa kusagutsikana uku. Ini handina kukwanisa kukutendai ishe nekuda kwezvinhu zvikuru zvamakaita, pachinzvimbo ini ndinonyunyuta zvinovava pane izvo zvamusina kuita. Ishe Jesu, ndinonamata kuti mubatsire netsitsi dzenyu muzita raJesu.
Ishe, ndinoparadza mhando dzese dzedambudziko dzakapinda muhupenyu hwangu nekuda kwekukara, ndinobvisa matambudziko aya muzita raJesu. Ishe, munzira dzese idzo muvengi anga achishungurudza hupenyu hwangu nekuda kwekukara, ndinonamata kuti nemoto weMweya Mutsvene, kutambudzwa kwakadai kunosvika kumagumo muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinoparadza miseve yese yakaipa yakatumirwa muhupenyu hwangu kuparadza hupenyu hwangu. Wese mweya wekukara wakandwa muhupenyu hwangu kuti ndikonzere chinangwa, ndinokuparadza nhasi muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinokumbira kuti netsitsi dzenyu, mundidzidzise nzira yekuziva mweya wekukara uyu. Ndinokumbira kuti Mweya Mutsvene nesimba renyu zvifukidze hupenyu hwangu uye nesimba remweya mutsvene mweya wekukara hauchazove nenzvimbo muhupenyu hwangu zvakare muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinonamata kuti mundipe mweya wekugutsikana. Ndipeiwo nyasha kuti ndigutsikane mune zvangu kugutsikana. Ndipeiwo nyasha dzekuisa tarisiro yangu pazvinhu zvawakaita netariro uye nekuvimbiswa kuti ucharamba uchiita zvinhu zvandagara ndakakutarira muzita raJesu.
Baba Tenzi, munzira dzese idzo muvengi anoda kudzikamisa kufambira mberi kwangu muhupenyu kuburikidza nemweya wemakaro, ndinonamata kuti muzondiponesa nhasi muzita raJesu. Ini ndinoramba kupotsa nzvimbo yangu saEsau akarasikirwa nezita rake muzita raJesu. Ndinonamata kuti mundibatsire kuti ndisazopedzwa nemweya wemakaro muzita raJesu.
Shoko raIshe rinoti, Mwari wangu achazadzisa zvese zvandinoda maererano nehupfumi hwake mukubwinya kuburikidza naKristu Jesu. Ini ndinouya ndichipesana nemweya wese wekusahadzika mupfungwa dzangu unogona kundiita kuti nditevere zvinhu zvehupenyu ndosiya mujaho wedenga muzita raJesu.
Ndinonamatira kupindwa nechisimba kwemweya mutsvene muhupenyu hwangu, simba remweya mutsvene rinozoparadza chose chose mabasa evavengi, ndinonamata kuti riuye nesimba muhupenyu hwangu muzita raJesu. Chinyorwa chinoti kana mweya wauya pamusoro pako, unomutsa muviri wako unofa. Ndinonamata kuti muviri wangu unofa umutsirwe nesimba reMweya Mutsvene, nemuzita raJesu.
Ishe, ndinozivisa kuti makaro haatadzise kufambira mberi muzita raJesu. Pandinopinda pabasa randakagadzirirwa ini, pandinopinda mune zvandakafunga, makaro haaite kuti ndiwire muzita raJesu.
Wese mweya wekukara wakatsidza kundiita kuti ndidzokere mumujaho nekutsvaga kudenga, ndinokuparadza nhasi nesimba muzita raJesu. Chinyorwa chinoti regai uyo anofunga kuti akamira achenjerere kunze kwekunge adonha, ndinoramba kuwira muzita raJesu.
Rugwaro runoti usazvidya moyo pasina asi muzvinhu zvese kuburikidza neminyengetero minamato nekutenda ita kuti chikumbiro chako chizivikanwe kuna Mwari. Ishe, ndinokutendai nekundibatsira kukunda simba remakaro. Ndinokutendai nenyasha dzamakandipa kuti ndikunde makaro. Ndinokutendai netsitsi dzenyu. Nenyasha dzenyu ndisingapedze, Ishe, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Previous nyayaNzira shanu dzekukunda Kutya sevatendi
inoteveraKunamata Kunongedzera Kudhara Yako Kurota Jobho
Mavhesi eBhaibheri Kune Vakaputsika Mwoyo